एनआरएनको आप्रवास समस्या समाधान उपसमितिको पहिलो बैठक सम्पन्न – MeroJilla.com
स्पेन । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएन ) को आप्रवास समस्या समाधान उपसमितिको पहिलो बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा पहलकदमी चाल्ने उद्देश्यले गठन भएको यस उपसमितिको बैठक सन्चालन संयोजक दीपक खरेलले गरेका थिए । बैठकमा सहभागी सदस्यहरुको छोटो परिचय एवं स्वागत कार्यक्रम पश्चात उपसमितिका सल्लाहकारद्वय डा. बोधराज सुबेदी र धरम के .सी. ले बैदेशिक रोजगारीमा बिदेशिएका नेपालीहरुको समस्या बारे जानकारी संकलन गरि त्यसको छलफल सम्बन्धित मुलुकका एनआरएनएसंग गर्नु पर्ने आबश्यकता भएको कुरामा जोड दिएका छन्।
बैठकले नवराज पोखरेललाई उपसमितिको उपसंयोजकमा नियुक्त गरेको छ। आगामी महिनामा हुने दोस्रो बैठकमा उपसमितिका सहभागी सदस्यहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा बैदेशिक रोजगारमा बिदेशिएका नेपालीहरुका बिबिध समस्या हरुको लिखित टिप्पणी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । संयोजक दिपक खरेलले दैनिक बढ्दै गइरहेको मानव तस्करी रोक्न र वैदेशिक समस्या समाधानमा सरकारसँग मिलेर काम गर्नु पर्ने आबश्यकता भएको कुरा बताएका छन्। बैठकमा संयोजक दीपक खरेल, उपसंयोजक नवराज पोखरेल, सल्लाहकारद्वय डा. बोधराज सुबेदी र धरम के.सी. लगायत १५ सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।